UTHINI UMAHLUKO PHAKATHI KWEAKHAWUNTI YE-OUTLOOK KUNYE NE-HOTMAIL? - ITHAMBILE
Uthini umahluko phakathi kweAkhawunti ye-Outlook kunye ne-Hotmail?
Uyintoni umahluko phakathi kweAkhawunti ye-Outlook ne-Hotmail? Zininzi iinkonzo ezibonelelwa nguMicrosoft kunye nezinye iinkampani ezikuvumela ukuba uhlale unxibelelana nehlabathi langaphandle. Ezi nkonzo zikunika uhlaziyo malunga nomhlaba ongaphandle malunga nokwenzekayo kwilizwe langaphandle kwaye vumela uhlale unxibelelana nabanye abantu ngemiyalezo, ii-imeyile kunye neminye imithombo yonxibelelwano. Eminye yemithombo nguYahoo, u-Facebook, u-Twitter, u-Outlook, uHotmail kunye nabanye ngokukugcina uhambelana nehlabathi langaphandle. Ukuze usebenzise nayiphi na kwezi nkonzo, kuya kufuneka wenze iakhawunti yakho eyahlukileyo usebenzisa naliphi na igama lomsebenzisi elikhethekileyo njenge-imeyile okanye inombolo yefowuni kwaye usete iphasiwedi eya kugcina iakhawunti yakho ikhuselekile kwaye ikhuselekile. Ezinye zeenkonzo ziluncedo kakhulu kwaye abantu bazisebenzisa kubomi babo bemihla ngemihla ngelixa ezinye zingaluncedo kakhulu kwaye ke, azisetyenziswa ngabantu abaninzi.
Kuzo zonke ezi nkonzo, imithombo emibini efanelekileyo edida uninzi lwabantu yi-Outlook ne-Hotmail. Uninzi lwabantu lusilele ukwahlula umohluko phakathi kwabo kwaye uninzi lwabo lucinga ukuba i-Outlook ne-Hotmail ziyafana kwaye akukho mahluko phakathi kwazo.
Ukuba uphakathi kwabo bantu badidekile phakathi kwe-Outlook ne-Hotmail kwaye ufuna ukwazi ukuba ngowuphi umahluko phakathi kwabo, emva kokufunda eli nqaku amathandabuzo akho aya kucaciswa kwaye uya kucaca malunga nokuba yintoni umgca omncinci phakathi kwe-Outlook kunye Hotmail.
ayikwazi ukufaka uhlaziyo lweWindows
Inkqubo ye- imbonakalo ngumphathi wolwazi lomntu olwenziwe nguMicrosoft. Zombini ziyafumaneka njengenxalenye yeOfisi Suite yazo kunye nesoftware ezimeleyo. Isetyenziselwa isicelo se-imeyile kodwa ikwaquka nekhalenda, umphathi womsebenzi, umphathi woqhakamshelwano, ukuthatha amanqaku, ijenali kunye nesikhangeli sewebhu. IMicrosoft ikhuphe izicelo eziselfowuni kuninzi lwamaqonga eselfowuni kubandakanya i-IOS kunye ne-Android. Abaphuhlisi banokwenza isoftware yabo yesiqhelo esebenza kunye nezinto zangaphandle kunye nezeOfisi. Ukongeza koku, izixhobo zeFowuni yeWindows zinokuvumelanisa phantse yonke idatha ye-Outlook kwi-Outlook Mobile.
Ezinye zeempawu ze-Outlook zezi:
IHotmail yasekwa ngo-1996 nguSabeer Bhatia noJack Smith. Yatshintshwa kwafakwa Umboniso.com Ngo-2013. Siseti esekwe kwiwebhu yewebhu, abafowunelwa, imisebenzi kunye neekhalenda zeMicrosoft. Ithathelwa ingqalelo njengeyona nkonzo yewebhu ehamba phambili kwihlabathi emva kokuba ifunyenwe yiMicrosoft ngo-1997 kwaye iMicrosoft iyazise njengeMSN Hotmail. UMicrosoft walitshintsha igama lakhe amatyeli aliqela kwisithuba seminyaka kwaye utshintsho lwamva nje kwathiwa yiOxpress.com kwinkonzo yeHotmail. Inguqulelo yayo yokugqibela yakhutshwa nguMicrosoft ngo-2011. IHotmail okanye i-Oxpress.com yamva nje iqhuba ulwimi loyilo lweMetro oluphuhliswe nguMicrosoft olusetyenziswa kwiisistim zabo zokusebenza- Windows 8 kunye Windows 10.
Akukho mfuneko yokuba nenkqubo yokusebenza kweewindows ukuze usebenzise i-Hotmail okanye i-Outlook.com. Ungaqhuba i-Hotmail okanye i-Outlook.com kuso nasiphi na isikhangeli sewebhu sayo nayiphi na inkqubo yokusebenza. Kukho iapps ye-Outlook ekuvumela ukuba ufikelele kwiakhawunti yeHotmail okanye ye-Outlook.com kwifowuni yakho, ithebhulethi, i-iPhone, njl.
Ezinye zeempawu zeHotmail okanye i-Outlook.com zezi:
Umahluko phakathi kwe-Outlook ne-Hotmail
Njengoko ubonile ngasentla ukuba i-Outlook ihluke kakhulu kwi-Hotmail. Imbonakalo yinkqubo ye-imeyile yeMicrosoft ngelixa i-Hotmail yiOutlook.com yakutshanje eyinkonzo ye-imeyile ekwi-Intanethi.
Iwindows emnyama yesikrini enesikhombisi emva kokungena
Ngokusisiseko, i-Outlook yinkqubo yewebhu ekuvumela ukuba ukhangele i-akhawunti yakho ye-Hotmail okanye ye-Outlook.com.
Apha ngezantsi kukho umahluko phakathi kwe-Outlook kunye ne-Hotmail ngokwesiseko sezinto ezithile:
Imbonakalo yi-imeyile efumanekayo kuzo zombini ii-windows kunye neenkqubo zokusebenza ze-mac ngelixa i-Hotmail okanye i-Outlook.com yinkonzo ye-imeyile ekwi-intanethi enokufikelelwa kuso nasiphi na isixhobo esinaso nasiphi na isikhangeli sewebhu okanye i-Outlook mobile app.
Iinguqulelo ezintsha ze-Outlook zenziwe ngohlobo lokuba zikhangeleke zicocekile kunezo zangaphambili.
I-Oxpress.com okanye iHotmail iphuculwe kakhulu kwiinguqulelo ezidlulileyo kwaye kwiinyanga ezizayo, i-Oxpress.com iya kuphuculwa ngenkangeleko entsha kunye nokusebenza okuphuculweyo, ukhuseleko kunye nokuthembeka. Iakhawunti yeimeyile ye-Outlook.com iphela nge @ outlook.com okanye @ hotmail.com
I-Hotmail ayiseyiyo inkonzo ye-imeyile kodwa iidilesi ze-imeyile ze-hotmail.com zisasetyenziswa.
IHotmail okanye i-Outlook.com inikezela ngeendlela ezininzi zokugcina ibhokisi yakho engenayo ihlelwe. Zonke ii-imeyile zihlelwe ngokweefolda. Ezi folda kulula kakhulu ukufikelela kuzo nokuziqhatha. Ungatsala kwaye ulahle ii-imeyile ngaphakathi naphakathi kweefolda ukuzigcina umkhondo wazo. Kukho nezinye iindidi onokuthi uzinike imiyalezo kwaye ezi zigaba zivela kwibar esecaleni.
I-Outlook, ngakolunye uhlangothi, ifana nayiphi na enye inkonzo yeMicrosoft enika ukhetho lokwenza ifayile entsha ye-imeyile, ukuvula nayiphi na ifayile, gcina ifayile, ukukhangela iifayile, iintlobo ezahlukeneyo zeefonti ukubhala ifayile kunye nezinye izinto ezininzi.
I-Outlook ikuvumela nge-1Tb yokugcina kwasekuqaleni. Olo lulondolozo olukhulu kakhulu kwaye awusoze uphelelwe okanye usebenze nokuba kusezantsi kugcino. Ingaphezulu lee kunoko kubonelelwa yiHotmail okanye i-Outlook.com. Ukuba uphelelwe yindawo yokugcina unokuhlaziya indawo yokugcina kunye nayo yasimahla.
Zombini i-Outlook kunye ne-Hotmail okanye i-Outlook.com zineempawu ezifanayo zokhuseleko ezibandakanya inkqubo yokuqinisekisa izinto ezininzi, ifayile ephambili, kunye nokubethela i-imeyile, ulawulo lwamaxwebhu eVisio kunye nolawulo olukhethekileyo lwezakhono ezibenza bakwazi ukufumana ulwazi olubuthathaka. Ukwenza ukuthengiselana kolwazi kukhuseleke ngakumbi, ikhonkco kwizincamathiselo zingathunyelwa endaweni yeefayile zezifakelo.
windows 10 ilaptop igcina ukunqamka kwi-wifi
Ukuze usebenzise i-Outlook, kufuneka ube nedilesi ye-imeyile. Kwelinye icala, iHotmail okanye i-Outlook.com ikunika idilesi ye-imeyile.
Ke, kulo lonke ulwazi olukhankanyiweyo ngasentla, kugqityiwe ukuba i-Outlook yinkqubo ye-imeyile ngelixa i-Outlook.com eyayisaziwa njenge-Hotmail yinkonzo ye-imeyile ekwi-intanethi.
Ndiyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kwaye ngoku ungamxelela ngokulula Umahluko phakathi kweAkhawunti ye-Outlook kunye ne-Hotmail , kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.
Kutheni i-netflixflix ingasebenzi kwiLaptop yam
ivenkile egcina ii-cache kunye neelayisensi zinokonakala
itafile yokwahlula mbr ukuya kwi-gpt
Iseva yommeleli emiselweyo ayiphenduli windows 7
Uyenza njani iMicrosoft Edge ngokukhawuleza
Imephu zikaGoogle azisebenzi kwi-android